Is it Fate or Destiny??? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 14 January 2010 17 February 2010 Categories Reproduction, Thoughts
One thought on “Is it Fate or Destiny???”
မှန်လိုက်တာ ဆရာရယ်။ ကျွန်မတို့ လူမျိုးက ‘ကံ’ ဆိုတဲ့စကားကိုတွင်တွင်သုံးပြီး လက်ကြောမတင်းကြဘူး။
Previous Previous post: လူတိုင်းလုံးမှာ သက္ကရာဇ် ၃၀၀၀ မှာ…
Next Next post: ဘ၀ အမောပြေဖို့ အဖြေရှာစို့ – ၁